अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक छैन, सोमबार यी विमान आउँदै छन् काठमाडौं
समाचार पर्यटन समाज
भागवत भट्टराई काठमाडौं, १० चैत
सरकारले आइतबार राती १२ बजेदेखि ९ दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले आफ्ना सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको छ । तर, विदेशी एयरलाइन्सहरूको विनाअवरोध आवत-जावत भइरहेको छ ।
कतिपय विमानस्थलहरूले प्रतिबन्धित राष्ट्रका नागरिकलाई समेत बोकेर ल्याएका छन् । शनिबार सिल्क एयरलाइन्सले सिङ्गापुरबाट नेदरल्याण्ड्सका नागरिक ल्याएपछि विवाद भएको थियो । अन्तत: ती नागरिकालाई नेपालमा झारिएको थियो ।
उसले फर्कने क्रममा १५९ जना यात्रु, जसमा २७ जना नेपाली र अन्य विदेशी यात्रु बोकेर गएको थियो । आइतबार बेलुका साढे ८ बजे पनि सिल्क एयरले उडान भरेको थियो ।
सोमबार पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको नियमित आवत-जावत भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय स्रोतका अनुसार सोमबार ३ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अनुमति पाएका छन् । सोमबार कतार, साउदी र कोरियाबाट नेपालमा उडान हुँदै छ, जसमा कतारमा २ पटक उडान रहेको छ ।
कतार एयरलाइन्सले बिहान ९: ४५ र दिउँसो साढे ३ बजेको उडान अनुमति पाएको छ । नेपालबाट कतार जानका लागि सर्वसाधारणले टिकट पनि लिएका छन् ।
विमानस्थल कार्यालय स्रोतका अनुसार कोरियन एयरलाइन्सले बेलुका ७ बजेको उडान अनुमति लिएको छ । उसले बेलुका ७ बजे नेपालबाट उडान भर्दै छ ।
इत्तेहादले पनि दिउँसो ३ बजेका लागि उडान भर्दै छ । उसले आवुधावीकाा लागि ३ बजेको उडान अनुमति लिएको छ ।
खाली आउने, भरी जाने
विमानस्थल कार्याललयका अनुसार यी ४ वटा उडान उताबाट खालि आउनेछन् भने यताबाट भरी जानेछन् । प्रतिबन्धित राष्ट्रबाहेकका नागरिकलाई उताबाट यात्रु नल्याउने शर्तमा उडान अनुमति दिइएको हो । तर, गत शनिबार भने शर्तविपरीत नेदरल्याण्ड्सका नागरिक नेपाल आएका थिए ।
यी विमान आउन पाउँछन्
सरकारले भनेअनुसार सोमबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने रोकिएको छैन । यसका बाबजुत पनि केही उडानहरू भने भर्न पाउनेछन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले उद्धारकाा लागि विदेशी एयर खालि ल्याएर उडान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।
तर, सोमबार उडान भर्दै गरेका एयरको भने उद्धार उडान होइन । त्यस्तै, आकस्मिक सेवासहितका एयरलाइन्सलाई पनि उडानको उनुमति दिन सकिने जानकारी प्राधिकरणले गराएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १०, २०७६, ०९:३९:००
तत्काल फिबर क्लिनिक सञ्चालन गर्न निर्देशन
प्रहरीले कुटे टेलिकमका कर्मचारी
लकडाउनको कहर : सरकारको आम्दानी ८० प्रतिशत घट्यो, तलब भत्तामै डर
लकडाउनको पाँचौँ दिन : सडक सुनसान, आकाश व्यस्त
अलपत्र पर्यटकको धमाधम उद्धार, आज मात्र ११ उडान
पैसाबाट पनि कोरोना सर्छ ! कसरी चलाउने दैनिकी ?
‘लकडाउन’ले मजदुरको जनजीवन कष्टकर, पाएनन् राहत
सुरक्षित खाद्यान्न आपूर्ति गर्न उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको माग
सिलिन्डर बोकाएर भुइँमा बसाएको तस्वीरबारे छानबिन सुरु
भैरहवामा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुने
१ सातामा १३ सय पर्यटकको उद्दार
लकडाउनको सातौँ दिन : विदेशमा छैन उडान, स्वास्थ्य सामान बोकेर प्रदेशमा सेनाको हेलिकोप्टर
मुस्ताङमा कोरोना भाइरसको जाँचका लागि सामग्री अभाव